11:17 AM ဖြိုးဖြိုးဖတ်ဖို့ No comments
ဘုရားရှင် လက်ထက်က သမားတော်ဇီဝက ဆိုတာ ရှိတယ် သမီးရဲ့။ သမီဖွားဖွားက မေမေတော်တော်ကြီးတဲ့အထိ (၁၃နှစ် ၁၄နှစ် ထိ) နေ့လည်နေ့ခင်း သားအမိ အားလပ်တဲ့အခါ ပြောပြတတ်တယ်။ ခု သူ့အကြောင်း အကျဉ်းချုံးပြောပြချင်တယ်။ ဘုရားရှင့်လက်ထက်တော်ကတည်းက ခွဲစိတ်ချုပ်လုပ်တဲ့ အတတ်ပညာ ရှိခဲ့ကြောင်းသိထားရအောင်လို့..။
ရာဇဂြီုလ်ပြည် ဗိမ္ဗိသာရ မင်းကြီးလက်ထက်မှာ သာလ၀တီဆိုတဲ့ အမျိုးကောင်းသမီးတယောက်ကို ကခြေသည်အရာထားလို့ မင်းမူးမတ်များ တစ်ညကို အသပြာတစ်ထောင်ပေးပြီး ပျော်ပါးကြတဲ့အထဲမှာ သားတော် အဘယမင်းသားလဲ ပါဝင်နေတယ်။ (အဇာတသတ်က တစ်ယောက်) တစ်နေ့တော့ သာလ၀တီမှာ အဘယမင်းသားရဲ့ သန္ဓေ စွဲကပ်တည်ရှိနေတဲ့အတွက် ကခြေသည်မဟာ မကျန်းမာဟန်ဆောင်ပြီးအခန်းအောင်းနေတယ်ကွဲ့။ ဆယ်လပြည့်တဲ့အခါ တင့်တယ်လှပတဲ့ သားယောက်ျားလေးကို မွေးဖွားပေမဲ့ မရှိအပ်လို့ ယူဆပြီး သားကို ကျွန်မ တို့အား စွန့် ပစ်စေပါတယ်။ကျွန်မတွေက လူသွားလမ်းတခုက အမှိုက်ပုံမှာ အလွယ်တကူ စွန့်ပစ်လိုက်သတဲ့။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဘဲ အဘယမင်းသားကလဲ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် အဲဒီ အမှိုက်ပုံနားရောက်ရှိလာပြီး ကျီးငှက်တို့ ၀ိုင်းအုံထိုးဆိတ်နေတဲ့ အထုပ်တခုကို စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ရှု မိပါရော။ မွေးကင်းစ ကလေးသူငယ်မှန်း သိတော့ (ငါနှင့် ထိုက်လို့ ရပေသည် )လို့ နှစ်လုံးမူကာ သိမ်းပိုက် မွေးမြူထားတယ်။
“အသက်ရှိသေးရဲ့လား" လို့ အဘယမင်းသားရဲ့ အမေးစကားကြောင့် အများက ကလေးနာမည်ကို "ဇီဝက"လုိ့ဘဲ လွယ်လွယ် ခေါ်လိုက်ကြတော့တယ် တဲ့။
အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ အဘယမင်းသားကို “ခမည်းတော် သားရဲ့ မိခင် အဘယ်သူဖြစ်သနည်း" လို့ မေးတော့တာပေါ့။ အဘယမင်းသားကလဲ မကွယ်မ၀ှက် “ဇိဝက သင့်မိခင်ကို ငါမသိ အမှိုက်ပုံတွင် ကျီးငှက်တို့ ၀ိုင်းအုံသဖြင့် ငါ ကောက်ယူ မွေးမြူထားခြင်းဖြစ်သည်" လို့ အမှန်အတိုင်း ဖွင့်ပြောလိုက်တယ်။
ဒါနဲ့ဘဲ ငါ့မှာ တွယ်တာစရာမိခင်ဘခင် မရှိ ငါ့ကိုယ်ငါ အားကိုးရမည်။ ပညာရှာ၇မည် လို့ တွေးတောပြီး ဘယ်လိုပညာမျိုးကို သင်ယူမလဲ အလေးအနက်ထား စဉ်းစားလိုက်တော့ ဆေးပညာမှတpfပါး သူ့အကျိုး ကိုယ့်အကျိုး ရှိစေမည့် အခြားသော ပညာရေးကို မမြင် လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး တက္ကသိုလ်ပြည်ကို ဦးတည် ထွက်ခွာ ခဲ့တယ်။ ဒီသာပါမောက္ခဆရာ့ထံမှာ ကောင်းစွာပညာသင်ကြားပြီး ၇နှစ်ရှိတဲ့အခါ
“ဆရာ ဆေးအတတ်ပညာ ပြီးဆုံးပါပြီလား “ မေးတယ်။ ဆရာက တူရွင်းတစ်ချောင်းပေးပြီး
“အချင်း ဇီဝက ဤတူရွင်းကို ယူ၍ အရပ်လေးမျက်နှာမှာ ဆေးဘက်မ၀င်သည့် အပင်ကို တူးယူးခဲ့ “
ခိုင်းစေသတဲ့။ ဇီဝကလဲ လေးရက်တိုင်တိုင် ရှာပေမဲ့ ဘယ်မှာမှ ဆေးဘက်မ၀င်တဲ့အပင် ရှာမရ သူ့နေရာနဲ့သူ အသုံးဝင်နေတာမိုို့ “ဆရာ မတွေ့ပါ" လို့ လျှောက်သတဲ့
“ကောင်းပြီ။ ဇီဝက အသင် ပညာစုံပြီးဖြစ်၍ ဆေးကုသခွင့် ငါပေးပြီ။ ပြန်လိုက ပြန်လော့" လို့ ဆိုတယ်။
ဒါနဲ့ ဆေးတက္ကသိုလ်က ကျောင်းဆင်းလာတဲ့ ဆေးသမားလေး ဆရာ ဇီဝကဟာ သာကေတပြည်ရောက်တော့ ဦးစွာ ဆေးကုဖို့ လူနာတယောက် ရရှိလိုက်တယ်။ သာကေတပြည်သူဋ္ဌေးကြီးကတော်ရဲ့ ဦးယဉ်းခေါင်းခဲနာ ကို ထောပတ်မှာ ဆေးများ ပေါင်းထည့် စပ်ယူပြီး နှာနှပ် ပေးပါသတဲ့။ ၇နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကိုက် ရောဂါဟာမမန်းရ မမှုတ်ရဘဲ တခဏချင်းပျောက်ကင်းချမ်းသာသွားပါသတဲ့ကွယ်။ ဒီတော့ အသာပြာလေးသိန်း ဆေးဘိုးရပါတယ်။ဇီဝကဟာ ရလာတဲ့ဆေးဘိုးဝါးခ လေးသိန်းကို ရာဇဂြိုလ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါ အဘယမင်းသားထံခစားပြီး “တကြိမ်သာ ဆေးကုရသေးသည့် လာဘ်ဦးကို ကျွန်ုပ်အားမွေးမြူသော ကျေူဇူးရှိသည်ဖြစ်၍ သိမ်းတော်မူပါ” လို့ အပ်သတဲ့။ အဘယမင်းသားက မသိမ်းပါဘူး။
"သင်ရသော ဥစ္စာသည် သင့် အဖို့သာ ဖြစ်ပါစေ” လို့ ငြင်းပယ်လိုက်တယ်။
‘ဒီ့နောက် ဗိမ္ဗိသာရမင်းကြီးရဲ့ မြင်းသရိုက်နာကို ကုပါတယ်။ လက်သည်းထိပ်မှာ ပါလာတဲ့ ဆေး မျှလောက်နဲ့ မင်းကြီးရဲ့အနာ အရှင်းပျောက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မင်းကြီးက ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ ဥစ္စာငွေကြေး ပေးသော်လည်း အဘိုးအဘွား ဥစ္စာကို မယူကောင်း မယူထိုက်ပါလို့ ငြင်းပယ်လိုက်တယ်။ အဲဒီနောက် ရာဇဂြိုလ် သူဋ္ဌေးကြီးရဲ့ ခေါင်းကိုက်နာကိုတော့ အိပ်ယာမှာ ပက်လက်သိပ်ပြီး နှာ ၏ အာနုဘော်နှင့် အိပ်ပျော်စေသတဲ့။ မေ့ဆေးသဘောပါ။ ပြီးရင် ဦးရေကို ဓါးနဲ့ ခြစ်လွှာပြီး ဦးနှောက်ဖေါက်စားနေတဲ့ ပိုးနှစ်ကောင်ကို ဖယ်ရှားပါတယ်။ ပြီးရင် ဦးရေကို ပြန်စေ့ပိတ်ပြီး ဆေးလူးပါတယ်။ ၂၁ရက်အကြာမှာ အကောင်းပကတိ ဖြစ်သွားပါသတဲ့။ ရရှိလာတဲ့ အသပြာ နှစ်သိန်းထဲက တ၀က်ကို မင်းကြီးအား ပေးအပ်ပါသတဲ့။
နောက်တစ်ယောက်က ဗာရာဏသီသူဋ္ဌေးသားတစ်ယာက် ခလေးတို့ ဘာဝဦးခေါင်းဇောက်ထိုး ဆော့ကစားရာမှာ အူထုံးသွားလို့ ဗိုက်ကိုခွဲ ပြီး ထုံးနေတဲ့ အူကို ဖြေပေးပါသတဲ့။ ပြီးမှ နေရာမှန် ပြန်ထားပြီး ခွဲထားတဲ့ ဗိုက်ကိုပြန်ချုပ်ပါတယ်။ ဆေးလိမ်းကြံထားပေးပြီးတာနဲ့ ၂ရက်အကြာမှာဘဲ အကောင်းပကတိ ဖြစ်သွားပါတယ်။ နောက်ထပ် သမီးအဖွားပြောတာက နားရောဂါ ဝေဒနာ ကို နှစ်ချီ ခံစားနေရတဲ့ သူဋ္ဌေးမတယောက်ရဲ့ နားထဲက ပိုးကောင်ကို ဗုံသံတစ်မျိုးပေးပြီး ချော့မြှူ ခေါ်ထုတ်တာနဲ့ ပျောက်ကင်းသွားတယ် လို့ ဆိုတယ်။ နောက် စမ္ပာနဂိုရ်ပြည်က စန္ဒပဇ္ဇောတမင်းရဲ့ ရောဂါကိုတော့ ထောပတ်နံ့ မရအောင် အနံ့ဖျောက်ပြီး ဆေးပေါင်းစုံ ပြွမ်းနှောလို့ တိုက်ကြွေးရ တယ်။ ဒီမင်းက အစောကတဲက ထောပတ်နံ့ မခံနိုင်ဘူးပြောထားတာမို့ သူကလဲ ထောပတ်မပါဘဲ ဆေးစီရင်လို့ မရတာကြောင့် ဆေးတိုက်ပြီးရင် ပြေးဖို့ အဆင်သင့်ပြင်ထားတာလေ။ ဇီဝကတို့ ဥာဏ်သွားပုံများ။ မင်းဆိုတာ စိတ်မထင်ရင် သတ်မှာကိုး။ ဆေးသောက်ထားတဲ့သူက လေကြို့ထိုးတဲ့အခါ ထောပတ့် နံ့ ထွက်ပါလေရော ဇီဝကကို သတ်စေ မိန့်တာဘဲလေ။
အစကတည်းက ဇီဝက က ဘုရင့်ထံ မြို့တခါးတွေကို ဇီဝကလာရင် ဖွင့်ထားပေးဖို့ ကြို ခွင့် တောင်းထားတာကွဲ့။ ဘာရမလဲ။ ဇီဝက က ဘဒ္ဒ၀တီဆင်မကိုစီး ပြေးလိုက်တာ တစ်ခါတည်း ရာဇဂြိုလ်ရောက်ရောဘဲတဲ့။ ရောဂါ ရှင်းရှင်းပျောက်သွားတဲ့အခါ သိဝိတိုင်းဖြစ် အသပြာ တသိန်းထိုက်တဲ့ ပုဆိုးကို ကံတော့ပါသတဲ့။ ရှင်ဘုရင်တွေမှ ၀တ်ရတဲ့ပုဆိုးလေ။ ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ ဇီဝကဟာ ဘိုးတော် ဗိမ္ဗိသာရမင်းကြီးကို မင်းနဲ့ထိုက်သည်လို့ တသိန်းတန်ပုဆိုးကို ကံတော့လိုက်ပါသတဲ့။ ဇီဝက ဟာ မိခင်ဘခင် ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့အားမငယ်တတ်ဘူး။ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စနဲ့ ရပ်တည်နိုင်အောင် ကြိုးစားတာများ တကယ် အတုယူဖို့ပါဘဲ။ သူ ဆေးပညာသင်မယ်လို့ လာတော့ ငွေကြေးဥစ္စာတပြားတစ်ချပ်မှ ပါလာတာမဟုတ်ဘူးကွဲ့. အဘယမင်းသားကိုတောင် ဘခင် မဟုတ်တာသိရော မပြောမဆို ထွက်ချသွားတာ။ ဆေးပညာသင်ပေးတဲ့ ဆရာ့အိမ်မှာ ဝေယျာဝိစ္စအားလုံး မငြီးမငြူ လုပ်ပေးတာကိုး။ ဆရာကလည်း ချစ်တော့ ဆရာစားမချန် အကုန်သင်ပေးတယ်။တဲ့။
ဇီဝကဟာ နောင်အခါ ဘုရားရှင့်သမားတော်လည်း ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်တိုင် မကျန်းမမာ ဖြစ်ရင် ဇီဝကသာ ကုသရပါတယ်။ (ဘုရားဘဲ နေမကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ မထင်လေနဲ့။) ဘုရားက ဟောထားတယ်လေ။ ငါဘုရား၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် ရေ မြေလေ မီး ဓါတ်ကြီးလေးပါး အစုအဝေးသာဖြစ်သည့်လူသားစင်စစ်တည်း တဲ့ သွေးလေဖေါက်ပြန်ရင် ကိုယ်လက်မအီသာတာ ဘာညာ ဖြစ်မှာဘဲလို့ ဆိုလိုတာ။ ဘုရားရှင် ၀မ်းတော်လားတဲ့အခါ ၀မ်းချုပ်တော်မူတဲ့အခါ စသည်တို့မှာ သမားတော် ဇီဝက သာ ကုစားရပါတယ်။ ဒေ၀ဒတ် က တောင်စောင်းကနေ ကျောက်မောင်းဆင် လှိမ့်ချတုံးက ခြေမတော် ထိခိုက်ပါတယ်။ ဇီဝက ကုသရပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ သမားတော် ဇီဝက ရယ်လို့ ရာဇဂြိုလ် ဝေသာလီ သာဝတ္ထိ စသည် ဘုရားရှင် သက်တော်ထင်ရှား ရှိခဲ့ ကာလ တလျှောက်လုံး ရှမ်းရှမ်းတောက် နာမည်ကြီးခဲ့တာလုိ့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဇာတသတ်မင်းသားကို ဘုရားရှင့်ကျောင်းတော်ကို သွားတရားနာဖို့ လမ်းညွှန်ခဲ့တာလဲ သမားတော် ဆရာ ဇီဝက ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဇီဝကရဲ့ အကြံဥာဏ်ကိုယူလို့ အဇာတသတ်မင်းဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦး ဖြစ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ လူသားတို့၏ အကျိုးစည်းပွားကို ဆောင်ရင်း နောက်ဆုံးမှာတော့ ဆရာဇီဝက ဟာ နိဗ္ဗာန်ဝင် စံပျော်သွားခဲ့ပါတယ် သမီးရေ..။
11:17 AM အထွေထွေ, မေမေ့ရဲ့စာ No comments
လူ့ဘ၀ဆိုတာ ကျော်ကြားမှုလေးတွေနဲ့ထုံမွှန်းထားရင် ပျော်စရာကောင်းမှာပါ။ ဟိုဟိုဒီဒီသွားသွားလာလာပျော်စရာကလေးတွေဖန်တီးနိုင်ရင်တော့ မိသားစုလေးတွေရဲ့ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တဲ့ အပျော်ရက်လေးတွေဖြစ်လာမှာပါပဲ။ Reader's Digest မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာက ကမ္ဘာတလွှားမှာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကလေးတွေ အမယ်စုံတင်ပြထားပါတယ်။ ကျော်ကြားထင်ရှားတဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလေးတွေမှာ မိသားစုလေးတွေ ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါသတဲ့။
(၁) ဘရာဇီးလ်က ကားနီးဗဲလ်ပွဲတော်
ဂျွန်လင်နွန်ကို လုပ်ကြံခြင်း(မပြီးဆုံးသေးတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်)
11:16 AM ဂျွန်လင်နွန်ကို လုပ်ကြံခြင်း, ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး No comments
ဒီနေ့ လင်နွန်လုပ်ကြံခံရတဲ့နေ့မို့ ပြန်တင်လိုက်တာပါ။
fb မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တင်ထားတဲ့ပုံလေးတွေ့တာနဲ့ ပြန်သတိရသွားလို့)
စာတွေဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း သိရတာတွေများများလာတဲ့အခါ ဘာကိုမှ မယုံကြည်နိုင်တော့သလိုပါပဲ။ တရားမျှတမှုဆိုတာတွေက နေရာတိုင်းမှာ၊ တိုင်းပြည်တိုင်းမှာ ပျောက်ကွယ်ခဲ့ကြတာပဲ။ ငယ်ငယ်ကတော့ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တဲ့အခါ စီအိုင်အေ၊ အက်ဖ်ဘီအိုင် ဂက်စတာပို အဖွဲ့ကြီးတွေ ထူးချွန်ခမ်းနားလိုက်တဲ့လှိူ့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေရယ်လို့ အံ့သြတကြီး ဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့။ မေမေကြိုက်လို့ သဘောကျခဲ့တဲ့ မင်းသားဟောင်းကြီးရေဂင်၊ ကနေဒီမိသားစုတွေ၊ အမေရိကန် သမ္မတတွေ၊ ဘုရ်ှအထိ အထင်ကြီးသဘောကျစိတ်တွေနဲ့။ တစ်ကယ်တော့ တိုင်းပြည်တိုင်းက အာဏာတစ်ခုရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ရှုပ်ထွေးပွေလီလှတဲ့ မဟာဗျူဟာတွေပြည့်နှက်နေတော့တာပဲ။ အမှန်တရားဆိုတာ ဘက်တစ်ဘက်၊ ဘယ်ဘက်မှာမှ ရှိမနေကြတော့ဘူး။
အာဏာ၊ ငွေကြေး၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုတွေကြားက အဲဒီလူတွေဟာ ...
အာဏာ၊ ငွေကြေး၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုတွေကြားက အဲဒီလူတွေကိုပဲ ...
အာဏာ၊ ငွေကြေး၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုတွေကြောင့်ပဲ .......
ထိတ်လန့်စရာကြီး ရက်စက်လှတဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ လက်စတုံး ဖျောက်ဖျက်နေကြတယ်။
ကမ္ဘာကြီးမှာ လုပ်ကြံမှုကြောင့် တိတ်တဆိတ်သေဆုံးသွားကြရသူတွေ၊ သဘာဝဘေးကြောင့် ပြက်ပြက်ထင်ထင်သေဆုံးကြရသူတွေ၊ စစ်ပွဲတွေကြောင့် အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ရင်း မရှုမလှသေဆုံးကြရသူတွေ ပြည့်နှက်လို့ နေပြီ။ တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ ပင်ပမ်းနွမ်းလျ နေတဲ့နိုင်ငံတွေ၊ လူတွေ လူတွေ .... သနားလိုက်တာ။ ဆုတောင်းရုံကလွဲလို့ ထောက်ပံ့မှုတစ်စုံတစ်ရာတောင် မလုပ်နိုင်တဲ့ကိုယ်ဟာ၊ သနားပြီးရင်း သနားနေမိတယ်။
အဖြေရှာမရတဲ့ ပုစ္ဆာတွေ၊ အမှန်တရား လိုက်ရှာလို့မတွေ့နိုင်လောက်အောင် ပရိယာယ်များလိုက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ စဉ်းစားရတာ၊ သတင်းတွေဖတ်ရတာ ခေါင်းတွေလည်း မကြည်နိုင်တော့ဘူး။ သနားလွန်းမက သနားလာလွန်းတော့လည်း ကိုယ့်အနီးအနားက ခွေးလေးကိုပဲ အားတိုင်း အစားတွေခွံ့ ခွံ့ ကျွေးနေမိတော့တာပဲ။ ခွေးလေးမှာ ရင်ပြည့်ရော့မယ်။ မယုံမရှိပါနဲ့၊ ဒါ တစ်ကယ်ပါ။ အပြစ်တင်လိုက အပြစ်တင်သွားနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ချင်တာတွေ ပိုပို များလာပြီး၊ မလုပ်နိုင်တာတွေပို ပို များနေတဲ့ ကိုယ့်အဖြစ်မှာ၊ မကြည်တဲ့ခေါင်း၊ လေးလံတဲ့ စိတ်နှလုံးကိုပိုက်လို့ ကိုယ့်ရဲ့နေ့တွေကို ကိုယ်တတ်နိုင်သလိုပဲ .. ဖြစ်သလိုကျော်ဖြတ်နေရတော့တာပါပဲ။
အန်တီစု ခရီးတစ်လျှောက်အဆင်ပြေ ချော့မွေ့ပါစေ။
၁၉၈၀ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက် နေ့၊ နယူးယောက်မြို့ရဲ့ ကျောချမ်းစရာကောင်းလှတဲ့ ဒါကိုတာတိုက်ခန်းအိုကြီးအပြင်ဘက်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်က စိတ်ကူးယဉ်ပြဇာတ်တစ်ပုဒ်လိုပါပဲ။ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စရာ။ ကမ္ဘာအကျော်ကြားဆုံးရောခ့်စတားလို့ ပြောနိုင်တဲ့ ဂျွန်လင်နွန်ဟာ သတိမရတစ်ချက် ရတစ်ချက်နဲ့ လဲလျောင်းခဲ့ရပါပြီ။ ထိပ်တုံးကျည်တောင့် ၄တောင့်က ကျောဘက်ကနေဖောက်ဝင်ခဲ့ပြီ။ ဇနီးသည် ယိုကိုအိုနိုက လင်နွန်ရဲ့ ဦးခေါင်းကို သူမရဲ့လက်တွေနဲ့ထွေးပွေ့ထားရင်းနဲ့ပဲ စူးစူးဝါးဝါးအော်ဟစ်နေခဲ့တယ်။
11:15 AM ပင်ကိုရေးဝတ္ထုရှည်, မေမေ့ရဲ့စာ No comments
“အလိုလေး လေ..သမီး ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲကွယ်။ ချုပ်တာမှ မကြာသေးဘူး။ ခက်တာပဲ”
တနေ့ ခိုင် ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ရှေ့ဘယ်ပြန် ညာပြန်လှည့်ကြည့်ကျေနပ်နေစဉ် မေမေ အခန်းထဲ ၀င်လာတယ်လေ။ ခိုင်ကလဲ ခိုင်ပဲ။ အင်္ကျီအသစ်စက်စက်ကိုမှ ဖြတ်တောက်ကိုက်ညှပ်ပြီလက်တိုလုပ်ပစ် ၀တ်ကြည့်နေတာပေါ့။ မေမေတို့က လက်တိုမှ ပေးမ၀တ်တာကို။ အိမ်စေတွေမှဝတ်ရသတဲ့။ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်နေရသူဖြစ်လို့လက်တိုဝတ်မှ အဆင်ပြေတယ် တဲ့။ ဒါပေမဲ့ သူမျုားဝတ်သလို မိခိုင်လဲ ၀တ်ချင်မိသည်။ မေမေကလေ ဗြစ်တောက် ဗြစ်တောက်နှင့် မြည်တွန်တောက်တီးနေတာ မပြီးဘူး။
“ဂုဏ်သရေရှိ မိကောင်းဘခင်သမီးဆိုတာ အ၀တ်အစားဝတ်ရင် လော်လီ ဆန်းပြားမှု မရှိရဘူး" လို့ တချက်လွှတ် အမိန့် ပေးသွားတယ်လေ။ ကျွန်မခါးက အင်္ကျီလေးကိုပါ ချွတ်ခိုင်းပြီး ယူသွားတော့သည်။
12:47 AM ညွှန်းတဲ့ ရုပ်ရှင် 1 comment
ဘ၀မှာ လူသားပီပီ စား ၀တ်နေရေး အတွက် ရုန်းကန်ရမည်။
အိမ်ထောင်မိသားစုရှိမည်၊ ဇနီး ခင်ပွန်း ချစ်သူ ရှိမည်၊ မိတ်ဆွေရှိမည်။
ဒါတွေ ဘာမှ မရှိတော့တဲ့အခါ ဒီလူအဖို့ ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရပါ့…..။
ဒီအဖြေကို နစ်ခ်ဟယ်လ် ဆေး က ကျွန်မကို ပါးပါးလျပ်လျပ်လေး ချပြခဲ့သည်။
နစ်ခ်ဟယ်လ်ဆေး စိတ်လေနေသည်။ ကားကို ဘယ်ဆီမောင်းရပါ့။ သူ အလုပ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီက အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ စဉ်းစားသည့်အခါ သူ့လို လခများများ လူကြီးဝန်ထမ်းထက် လစာနည်းနည်း လူငယ် ၀န်ထမ်းအသစ်တွေကို အစားထိုးတော့မည်။ ၁၅နှစ်လုံးလုံးအချိန်တွေ ဒီကုမ္ပဏီကို ပေးဆပ်ခဲ့ခြင်း၏ရလဒ်က အလုပ်ထွက်ရခြင်းပဲလား။ နစ်ခ်စိတ်ထဲ ခံပြင်းလှသည်။ ပိုဆိုးတာက ရိုးရိုးသားသား နှင်ထုတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဘယ်နှခုနှစ်က ဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ခဲ့ ဆိုပြီး အရက်မူးလွန်စဉ်က အပြစ်တွေကို ခုမှ ထုတ်ဖော်ပြောခံ ရတာပါပဲ။ သူ့အပိုင်ပစ္စည်းတွေကို ပုံး သုံးပုံးနှင့် ယူသွားနိုင်သည်တဲ့။ ဒါဆိုလုံလောက်ပြီတဲ့။ ကားကိုတော့ အခုလ နောက်ဆုံးပတ်ထိ အသုံးပြုနိုင်သေးသည်။ ဒီတော့လည်း ဒီကားတစ်စီးနှင့်ပဲ စိတ်ဦးတည့်ရာ လျှောက်သွားရတော့မည်။ ကားကို ရပ်လိုက်၊ ဘီယာ တစ်ဘူးမော့သောက်လိုက်။ နစ်ခ်အတွက် ဒီဘီယာဘူးတွေက မိတ်ဆွေထက် ရင်းနှီးမှုပိုနေကျ အဖော်တွေဖြစ်သည်။
`မင်းရဲ့ထုတ်ကုန်ကို သိရမယ်၊ အလုပ်ထဲမှာ ပါစင်နယ်ကွန်ပျူတာဖြစ်ဖြစ်၊ စာရွက်တစ်ရွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လို အလုပ်လုပ်နေ တယ်ဆိုတာ သိရမယ်၊ ဖောက်သည်ကို သိရမယ်၊ သူတို့ဆီက ရသမျှ အကုန် သင်ယူရမယ်။ သူတို့ ဘာလိုချင်တယ် ဘာမလိုချင်ဘူး ဆိုတာ နားထောင်နိုင်ရမယ်၊ ကွက်ကျော်ကြိုမြင်နေရမယ်။ အဖြေမရှိရင် အဖြေကို ရှာကိုရှာရမယ်၊ ရှင်းရှင်းလေးပဲ……´။
မနေ့ကအထိ တော့ ပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်း တစ်သဝေမတိမ်း နစ်ခ် အလုပ်တွေလုပ်နိုင်ခဲ့သားပဲ။ အခု……။
နစ်ခ်သိလိုက်ပြီ။ ထွေးရှုပ်လိမ်ရစ်တဲ့ စိတ်တွေနဲ့ အိမ်ကို ပြန်လာတော့ အံ့သြကြေကွဲစရာ မြင်ကွင်းတစ်ခုက ဆီးကြိုနေသည်။ အိမ်ထဲရှိသမျှ သူ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမှန်သမျှက အိမ်ရှေ့ မြက်ခင်းပြင်မှာ ဖရိုဖရဲပြန့်ကြဲ နေသည်။ အိမ်ကလည်း သော့ပြောင်းပိတ်ခံထားရပြီ။ တံခါးရွက်က သော့အိမ်က သူ့သော့တံကို မှတ်မိနိုင် ခြင်းမရှိတော့။ ကိုယ်ပိုင်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုလည်း သူ့အိမ်တံခါးက ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီ။ ထူးဆန်းလှချည့်။ မတတ်နိုင်။ ဇနီးသည် ကက်သရင်းဆီ ဖုန်းဆက်တော့လည်း ဖုန်းမကိုင်။ ဒီနေ့ ငါအလုပ်ပြုတ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပြမယ့် စကားတစ်ခွန်းကိုတောင် အချိန်ပေး နားထောင်မယ့်သူ မရှိ။ ပစ္စည်းအစုအပုံတွေကြားမှာ ဆက်တီတစ်ခုံကို ချကာ အဲဒီခုံပေါ် ထိုင်လျက် အိပ်ရတော့သည်။ မနက်လင်းတော့ အိမ်ရှေ့အိမ်မှာ မိန်းမတစ်ယောက် ပစ္စည်းတွေချနေတာမြင်သည်။ အိမ်ပြောင်းလာတာဖြစ်မည်။ ဗိုက်အနည်းငယ်စူထွက်နေသည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမကို ပစ္စည်းတချို့နစ်ခ် ကူသယ်ပေးလိုက်သည်။ သူမ နာမည်က စမန်သာ။ ဓာတ်ပုံဆရာမ တဲ့။
“မင်း ငါ့ပစ္စည်းတွေ ခဏကြည့်ပေးနိုင်မလား စမန်သာ”
စမန်သာက မြက်ခင်းပေါ်ပြန့်ကြဲနေသည့် ပစ္စည်းတွေကို လှမ်းကြည့်ကာ “အိုကေ”တဲ့။ ပြီးမှ သူ့ဝမ်းဗိုက်ကို သတိရသွားဟန်နှင့် ဆိုသည်။
“အို မဖြစ်သေးဘူး။ ကျွန်မ ဒီက ဆရာဝန်အသစ်နဲ့ သွားတွေ့ရဖို့ ရှိသေးတယ်ရှင့်”
သူ့ပစ္စည်းတွေအနားမှာ ကောင်လေးတစ်ယောက် စက်ဘီးတစ်စီးနှင့် ရိပ်သီရိပ်ဝှဲ လုပ်နေတာ နစ်ခ် မြင်သည်။ ကောင်လေး နာမည်က ကင်နီ။ ကားသော့ ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိ။ ကောင်လေး၏စက်ဘီးနှင့် စတိုးဆိုင်ပြေးရသည်။ ဆိုးတာက အကြွေးဝယ် ကတ်ကလည်း အလုပ်မလုပ်တော့။ တစ်ယောက်ယောက်က သူ့ကတ်ကို ပိတ်လိုက်ပြီ၊ အပြင်လူလုပ်လို့မရမှန်း နစ်ခ် သိပါသည်။ ကတ်ပေါ်မှာ လက်မှတ်အတူ ရှိနေသည့်လူ၊ ကက်သရင်းပဲပေါ့။ ရက်စက်ပါပေ့။ ပြန်လာချိန်မှာ သူ့ကားပေါ်လူတစ်ယောက်က တက်ထိုင်ကာ မောင်းထွက်သွားသည်။ သော့ပျောက်နေတဲ့ကြားက ဘာနဲ့ဘယ်လို ဖွင့်မောင်းပါလိမ့်။ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပဲ သူ့ကားကို ခိုးမောင်းသွားသည်။ နစ်ခ် ပြေးလိုက်ပေမဲ့ မမီ။ ကားထဲက သူ့အကျီတချို့ လမ်းမပေါ်ပြန့်ကြဲလျက်။ နောက်ဆုံး ဒီမြက်ခင်းပြင်ကိုပဲ ယာယီအိမ် လုပ်ရတော့သည်။ သူ့တစ်ကိုယ်စာ လှည့်သာ ထိုင်သာရှိအောင် ပြန့်ကြဲနေသည့်ပစ္စည်းတွေကို အနည်းငယ် နေရာတကျဖြစ် အောင် ရွှေ့ပြောင်းတပ်ဆင် နေရာချရသည်။ ထိုင်စရာ အိပ်စရာ ထိုင်ခုံတစ်လုံး။ တပ်ဆင်ခြင်းအနုပညာအောက်မှာ ဘီယာတစ်ဘူး ထိုင်သောက်နေခိုက် ရဲတစ်ပွေ ရောက်လာ သည်။ လူမြင်ကွင်းမှာ မဖွယ်မရာ မလုပ်ရဘူးတဲ့။ သောက် ပြဿနာပဲ။
“ ကျွတ်…ဒါ မဖွယ်မရာလား၊ ကျုပ်အိမ်ရှေ့ ကျုပ်ဘာသာ ဘီယာထိုင်သောက်တာလေ”
မကျေမချမ်းနှင့် အဲဒီရဲပြန်ထွက်သွားပြီး နောက်ထပ် ရဲတစ်ပွေရောက်လာပြန်သည်။ ဒါက သူ့မိတ်ဆွေ ဖရန့်ခ် ပါ။
“ငါ အလုပ်ပြုတ်ခဲ့တယ်၊ ငါ့မိန်းမကလည်း ထွက်သွားပြီ…”လို့ ပြောပြလိုက်တော့ ဖရန့်က အံ့သြပုံမရ။ တစ်နေ့ ဒီလိုပဲ ဖြစ်မှာ ပေါ့ဆိုသည့် အရာရာကို ကြိုသိနေသလို မျက်လုံးဝါ၀ါတွေနှင့် စိတ်ပျက်သလို နှစ်သိမ့်ချင်သလို ကြည့်သည်။ နစ်ခ်က သူ့ သဘောထား ကို ရှင်းပြလိုက်သည်။
“ဒါ ငါ့အိမ်လေ၊ ငါ့မြက်ခင်းလေ၊ ဒီနေရာလေးက ငါ့နေရာလေးပါကွာ၊ ငါ ဒီဟာတွေကို ချန်မထားခဲ့နိုင်ဘူး၊ ငါ ဒီကနေ ခွာမသွားချင်ဘူး”
“ကောင်းပြီ၊ ဒီည ဘယ်သူမှ ဒီဘက် ကင်းမလှည့်အောင် ငါ ကြည့်ကြက်လုပ်လိုက်မယ်”
ဒီလိုဆိုတော့လည်း ဖရန့် ကို ကျေးဇူးတင်စရာပဲ။ မနက်လင်းတော့ ဖရန့် ရောက်လာသည်။ သူ့လက်ထဲ စာရွက်တစ်ရွက် လာထည့်သည်။
“ဒီမှာ ထိုင်နေရင် စုတ်တီးစုတ်ပဲ့ပဲ ဖြစ်နေမှာပဲ၊ ရော့ ဒီမှာ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသူတွေကို ၅ ရက်နဲ့နေရာပြန်ချပေးတယ်၊ လက်မှတ်ထိုးလိုက်၊ မင်းဆို သုံးရက်နဲ့ရမယ်”
တယ်တော်တဲ့ သူငယ်ချင်းပဲ၊ အများသူငါထက် အခွင့်အရေးပိုရအောင် လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့။ ခက်တာက ဒီနေရာလေး ကနေ ခွာမသွားချင်။ အရာရာ ဒီနေရာမှာရှိသည်။ ကက်သရင်းချစ်သည့် ငါးလေးတွေမွေးထားသည့် ရေကန်လည်းရှိသည်။ ဒါ သူ့အိမ်၊ အရာရာမြှုပ်နှံရင်းနှီး တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အိမ်တစ်လုံးကို ချန်ရစ်ထားခဲ့ရမှာ မဖြစ်နိုင်တာပဲ။
“ငါ့ဟာတွေ ဒီဟာတွေရောင်းပစ်ခဲ့ရမှာလား၊ ထိုက်သင့်သလောက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးမှ အရာရာကို ဖြိုဖျက်ခဲ့ပြီး ဘ၀ကို ငါ အသစ်ပြန်စရမှာလား”
”မင်းရဲ့စုတ်တီးစုတ်ပဲ့ပစ္စည်းတွေ ရောင်း မရောင်း ငါစိတ်မ၀င်စားဘူး၊ သုံးရက်နဲ့ ဒီပစ္စည်းတွေ အပြီးရှင်းမလား၊ ထောင်ထဲ သွားမလားဆိုတာလည်း ငါ မမေးတော့ဘူး”
ဖရန့်စိတ်ဆိုးသွားပြီ။ ဆိုးလေ ဆိုးပေါ့။ အိမ်ကို အပိတ်ခံရတော့ရော ဘာအရေးလဲ ဒီလိုပဲ အိမ်ရှေ့ ဒီမြက်ခင်းပြင်လေးမှာ နေလိုက်ရုံပေါ့။ ဒီမှာပဲ နေဖို့ နစ်ခ် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
နောက်တစ်နေ့။ သူ့ပစ္စည်းတွေအတွက် အစောင့်သဘော ကန်နီဆိုတဲ့ကောင်လေးကို ခေါ်ထားရသည်။ တော်တော်လာတဲ့ ချာတိတ်၊ ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲ အရင်မေးသည်။ ပြီးတော့ ငွေဘယ်လောက်ရမလဲတဲ့။ တစ်နာရီ ၄ဒေါ်လာပေးမည် ဆိုတော့ အရီဇိုးနားမှာ အလုပ်ခေါ်ဈေးက အနိမ့်ဆုံး ၇ဒေါ်လာနဲ့ ၂၅ဆင့်ရှိတယ်တဲ့ ။ ၇ဒေါ်လာနဲ့တည့်သွားသည်။ နစ်ခ်ပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းတွေကို ကင်နီက ရောင်းပေးရမည်၊ နစ်ခ်မရှိချိန်မှာ အစောင့်လုပ်ပေးရမည်။
“ဒါ ရှင့်ရဲ့ ပထမဆုံး အဟောင်းရောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံလား”လို့ စမန်သာက မေးလာသည်။ စနေနေ့ဆို ရောက်လာ တတ်တဲ့လူတွေကို သတိထား၊ သူတို့ကအောက်ဈေးနဲ့ မတရားဈေးနှိမ်ယူတတ်တယ်လို့ သတိပေးလာသည်။ စမန်သာက အဲဒီလူတွေ နှင့် အဆက်အသွယ်ရှိသည်၊ ဟောင်းပေမဲ့ ကောင်းနေဆဲ ကင်မရာတွေ သူတို့ဆီက ပြန်ဝယ်သုံးသည်တဲ့။
“တချို့တလေ ရောင်းရဖူးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဒါနဲ့တော့ ဘယ်တော့မှ ချမ်းသာလာမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါနဲ့ စကားမစပ် ပြောရဦးမယ်၊ ကျွန်မ ယောက်ျားက ကျွန်မဆီက ဓာတ်ပုံဝယ်ဖူးတယ်ရှင့်၊ ဒါနဲ့ပဲ သူနဲ့ဖူးစာဆုံတာ”
“ငါ့မှာ နမော်နမဲ့ အမှားတွေရှိခဲ့တယ်”လို့ အစချီကာ စမန်သာကို အတိတ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခု ပြောပြဖြစ်သည်။
“အလုပ်ကိစ္စ အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခု ပြီးဆုံးသွားလို့ အောင်ပွဲခံပါတီလုပ်တုန်းက လူတိုင်းရှန်ပိန်သောက်ကြတယ်၊ ငါလည်း သောက်တယ်၊ ဘယ်လောက်သောက်မိလဲတော့ မသိဘူး၊ ရှယ်ရွန်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးအခန်းမှာ ငါတို့ဆက်သောက်ဖြစ်တယ်၊ မိုးလင်း တော့ ရှယ်ရွန်ထွက်သွားတယ်၊ မကြာခင်ပဲ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနဲ့ အင်တာဗျူးသမားတွေရောက်လာပြီး…ဟာ..ငါ မပြောချင်တော့ ဘူး…..မင်းသိမှာပါ မင်းဘာသာတွေးကြည့်တော့…”
“ရှင် တစ်ခုခု လုပ်မိခဲ့သလား…”
“မသိဘူး မသိဘူးကွာ၊ ငါသိတာက အဲဒီတုန်းက လူတိုင်းလက်ထဲမှာ ဖန်ခွက်တစ်လုံးစီရှိသလို င့ါလက်ထဲမှာလည်း ဖန်ခွက်တစ်လုးံရှိတယ်ဆိုတာပဲ”
ကျွန်မ သွားသင့်ပြီ ဆိုကာ စမန်သာ ထထွက်သွားသည်။ ပစ္စည်းတွေ ရောင်းကူနေသည့် ကင်နီ့ကိုကြည့်ကာ နစ်ခ်မေးသည်။
“မင်းကိုအသုံးမကျဘူးလို့ မင်းအိမ်က ဘာလို့ထင်တာလဲ ငါမသိဘူး၊ တကယ်တော့ လူတိုင်းမှာ `ငါ´ဆိုတာ များနေလို့ပါ၊ `ငါ´နည်းနည်းပဲလိုပြီး `ငါတို့´ဆိုတာ များများလိုတာ ဒါကို လူတော်တော်များများ မသိကြဘူး”
အမေသုံးခဲ့သည့် ကင်မရာလေးကို နစ်ခ်မရောင်းချင်။ စမန်သာ့ကို သတိရသွားသည်။ စမန်သာ့ကို ကင်မရာသွားပေးလိုက် သည်။
“အို ဘုရားရေ အကောင်းကြီးပဲရှိသေးတယ်”
ကင်မရာလေးကို ကြိုက်ပုံရပေမဲ့ စမန်သာက ငြင်းသည်။ ငါမင်းကို လက်ဆောင်ပေးချင်လို့ပါလို့ ပြောရသည်။ စမန်သာက နစ်ခ် ဘက်ကိုလှည့်ချိန်ကာ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံစမ်းရိုက်လိုက်သည်။
နောက်တစ်နေ့မှာ အထက်တန်းကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်း ဒီလိုင်လာ့လိပ်စာကို စုံစမ်းကာ နစ်ခ်သွားလည်သည်။ လောလောဆယ် ငယ်ငယ်တုန်းကမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ယောက်ကို တွေ့ချင်စိတ်ပေါ်နေသည်။ ခင်ပွန်းသည်က ပစ်ထားခဲ့လို့ ကလေး သုံးယောက်နှင့် ဘ၀ကို ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေသည့် သူငယ်ချင်းကို ကြည့်ကာ နစ်ခ် များစွာ အံ့အားသင့်ရသည်။
“မင်း ဒီဟာလေးတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲ၊ ကျွေးမွေးရတယ်၊ ပြုစုရတယ်၊ ထောက်ပံ့ရတယ် တစ်နေ့တစ်နေ့ မဆုံးတဲ့ တာဝန်တွေလေ”
နစ်ခ်တကယ်အံ့သြနေသည်။ သူ့မှာတော့ တစ်ကိုယ်စာပင် တာဝန်ယူနိုင်ခြင်းမရှိ၊ အလုပ်ပြုတ်၊ မိန်းမက အိမ်ကထွက်သွား၊ အိမ်က အပိတ်ခံရ။ အရေးအကြောင်းဆို မိန်းမတွေမှာ ယောက်ျားတွေထက် တာဝန်ယူရဲတဲ့သတ္တိ ပိုရှိလေသလားမဆိုနိုင်။ ဒီလိုင်လာ ပြောခဲ့တဲ့စကားက သူ့အာရုံထဲ ကပ်ငြိပါလာသည်။ `အဆိုးမရှိဘဲ တစ်လျှောက်လုံးကောင်းနေတာဟာ အကောင်း မဟုတ်ဘူး၊ အဆိုးတွေကြုံပြီး အဆိုးတွေထဲမှာ ကောင်းအောင် လုပ်နိုင်တာကမှ တကယ့် ပြည့်ဝတဲ့ အကောင်း´ တဲ့။
အဆိုးတွေထဲမှာ ကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့။ လောလောဆယ် နစ်ခ်မှာ ဘီယာကုန်နေပြီ။ ညက ဘီယာသောက်ဖို့ ပိုက်ဆံမရှိတော့။ စတိုးဆိုင်ရှေ့သွားပြီး ဈေးဝယ်သူတွေဆီကနေ ဘီယာတစ်ဘူးလောက်ပေးဖို့ မရှက်မကြောက် တောင်းမိသည်။ ဘယ်သူမှလည်း သူ့ကို အရေးမလုပ်ကြ။ သူ့နေရာလေးကို ပြန်လာခဲ့သည်။ မြက်ခင်းပေါ်ပြန့်ကြဲနေသည့် ပစ္စည်းတွေကို ဒေါသထွက် ထွက်နှင့် ကန်ကျောက်ပစ်လိုက်သည်။ အိမ်ကနေလှမ်းမြင်နေသည့် စမန်သာက မနေနိုင်တော့ဘဲ ဆေးလာတိုက်သည်။ ငါ ဘီယာတစ် ဘူးလောက် သောက်ဖို့လိုနေတယ်ပြောတော့ စမန်သာက ဒီဆေးပဲသောက်ပါ ပင်ပန်းတာတွေလျော့ကျသွားလိမ့်မယ်တဲ့။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု၊ အထီးကျန်မှုနဲ့အတူ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့လက်ရှိခံစားချက်တွေက စကားတွေ မှားယွင်းအောင် စေ့ဆော်လေ သလား နစ်ခ် မစဉ်းစားတတ်တော့ပြီ။
“မင်းကို စတွေ့ကတည်းက ငါးမိနစ်အတွင်း ငါနားလည်ခဲ့တယ်၊ မင်းကမင်းခင်ပွန်းအတွက် မင်းမြတ်နိုးတဲ့ဓာတ်ပုံသမားဘ၀ ကို စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခဲ့တာပဲ၊ ပြီးတော့ သူက တအားသောက်တယ်မို့လား၊ ငါ့လိုပဲလေ၊ သူ့ကို စိတ်ပြောင်းသွားအောင် နေရာအသစ် ၀န်းကျင်အသစ်တွေ မင်းဖန်တီးပေးတယ်၊ အဲဒါက ပိုကောင်းသွားအောင်လား၊ ပိုဆိုးသွားအောင်လား၊ ဘယ်လိုမိန်းမမျိုးက ဒီလူနဲ့ နေထိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာလဲ”
“ဘာ… ဘာပြောတယ် ဘယ်လိုမိန်းမ ဟုတ်လား ဒါဆို ကျွန်မက ဘာလဲ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ”
မျက်နှာတွေနီမြန်းဒေါသထွက်လာသည့် စမန်သာကို ကြည့်ကာ နစ်ခ် ပြောချလိုက်သည်။
“ဘာလဲ တစ်နေ့လုံး ငေးကြည့်နေတဲ့ အမူးသမားတစ်ယောက်ရှိလို့လား”
ဘာတွေဖြစ်ကုန်သလဲ နစ်ခ်မသိတော့။ စမန်သာက သူ့ကို ဘီယာဘူးခွံတွေနှင့် ကောက်ပေါက်ကာ ပြန်သွားသည်။ နစ်ခ် ၀မ်းနည်းထိခိုက်ကာ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ သူ့အနားမှာ ဘယ်သူမှ မရှိတော့။ ဘယ်အရာမှလည်း မရှိတော့၊ သောက်စရာ ဘီယာလေး တစ်ဘူးတောင်မှ မရှိတော့၊ ရှိရင်ကော သောက်ချင်ဦးမှာလား မသိတော့။ ဘယ်လို ဘယ်ပုံ အိပ်ပျော်သွားသည် မသိတော့။ ဘာမှ မသိတော့ဘဲ အိပ်ရာကနိုးထလာချိန်မှာ ကင်နီက သူ့ပစ္စည်းတွေကို မျိုးတူတာ မျိုးမတူတာ ခွဲခြားကာ စနစ်တကျနေရာချပေးထား သည်ကို တွေ့ရသည်။ ၀ယ်တဲ့သူတွေအတွက် လွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးထားတာလို့ ကင်နီပြောသည်။ ဖရန့်ရောက်လာကာ ပစ္စည်းတွေကို လှည့်ပတ်ကြည့်ရှု ၀ယ်ယူအားပေးနေကြသည့် လူတွေကို ကြည့်ရင်း နစ်ခ်ကို ပြောသည်။
“မင်း သူတို့ကို သွားခွင့်ပြုလိုက်ပြီပေါ့…”
“ဒါပေါ့ အဆုံးတော့ အားလုံး သွားရမှာပဲလေ” ကျွမ်းကျင်စွာ ဈေးရောင်းပေးနေသည့် ကင်နီ့ကို ငေးကြည့်ကာ ကက်သရင်းဆီဖုန်းခေါ်မိသည်။ ဖုန်းက ကိုင်မည့်သူမရှိ။ မက်ဆေ့ခ်ျအသံထားခဲ့လိုက်သည်။ “ကက်သရင်း အခု ငါ ဒါတွေကို မစွဲလမ်းတော့ဘူး၊ အားလုံးကို သွားခွင့်ပြုလိုက်ပြီ၊ ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ရင် ငါ့ကို ခေါ်လိုက်ပါကွာ”။
စမန်သာ့ဆီသွားကာ ညက စကားတွေကတောက်ကဆတ်ဖြစ်ခဲ့တာကို တောင်းပန်ရသည်။ သူမခင်ပွန်း ရောက်လာတော့ မည်လို့ စမန်သာပြောပြခဲ့သည်။ ၀မ်းသာစရာပဲ။ ကက်သရင်းရော သူ့ဆီ ဘယ်တော့ ရောက်လာမှာလဲလို့ တွေးကာ နစ်ခ် ရင်တွေ ခုန်လှုပ်သည်။ စမန်သာက ကင်မရာစမ်းကြည့်ရင်း ရိုက်ခဲ့သည့် သူ့ပုံကို ခုမှ ပေးလာသည်။ ပုံအောက်မှာ စာတန်းတစ်ခုတွေ့သည်။ အရာရာ မဆုံးရှုံးသေးပါဘူး တဲ့။ နစ်ခ် အားတက်သွားသည်။ အလုပ်ကတော့ ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီ။ မဆုံးရှုံးသေးတာ ဒါဖြင့် ..ကက်သရင်းဖြစ်မှာပေါ့။
ဖရန့်အလုပ်ရှိရာ ရဲစခန်းကို လိုက်သွားသည်။ ဖရန့်က ခဏစောင့်ပါဆိုကာ အတွင်းခန်းထဲ ၀င်သွားသည်။ စားပွဲပေါ်က ဖရန့်ရဲ့ဖုန်းမြည်လာသည်။ ကြည့်မိသွားသည့်မျက်လုံးတွေကို ဖောက်ထုတ်ပစ်ချင်သည်အထိ မုန်းတီးစက်ဆုပ်သွားသည်။ ဖုန်းခေါ်သူက ကက်သရင်း။ အရာရာအခုပဲ ဆုံးရှုံးသွားပြီ။ စမန်သာ့စကား မမှန်နိုင်တော့။ ဖရန့်ဝင်လာတော့ စိတ်တွေထိန်းမရဘဲ လက်သီးနှင့်ပစ်ထိုး မိသည်။ ဘယ်ရမလဲ ဖရန့်က လူဆိုးတွေကို လျှပ်တစ်ပြက် ဖမ်းဆီးနိုင်သည့် ရဲပဲ။ နစ်ခ်လက်သီးလောက်တော့ အပျော့ပေါ့။ နစ်ခ်လက် တွေကို ပြန်ချုပ်ထားနိုင်သည်။
“မိန်းမတွေက သောက်ပြီး အလုပ်မလုပ်တဲ့သူနဲ့ မသောက်ဘဲ အလုပ်လုပ်တဲ့သူ ဘယ်သူ့ကို ပိုကြွေမယ်ထင်လဲ၊ ကက်သရင်း က ပိုကောင်းတဲ့သူနဲ့ ထိုက်တန်တာ”တဲ့။
ဖရန့်စကားတွေက နစ်ခ်ရင်ကို မြားနဲ့တည့်တည့်ပစ်ခွင်းလိုက်သလို၊ ရင်တစ်ပြင်လုံး စူးနစ်အောင် နာသည်။ တော်သေး တာပေါ့၊ `မင်းမိန်းမ ကက်သရင်းက မင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့ ငါ့လိုလူနဲ့မှ ထိုက်တန်တာ´လို့ တိုက်ရိုက်မပြောတာပဲ ကျေးဇူးတင်ရဦးမည်။ နာနေတဲ့သူ့ရင်ကို ဗြန်းဗြန်းကွဲထွက်သွားအောင် မေးခွန်းတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်ခဲ့သေးသည်။
“မင်းနဲ့ ကက်သရင်း အတူအိပ်ခဲ့တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ၊ ပြီးတော့ ကက်သရင်းကို ပျော်ရဲ့လားလို့ မမေးခဲ့တာ ဘယ် လောက် ကြာပြီလဲ”တဲ့။
“မင်းက မူးဖို့ပဲ သိတဲ့လူ၊ မူးပြီး ရှယ်ရွန်နဲ့အိပ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ မင်းကို ချစ်နေသေးတယ်လို့တော့ ကက်သရင်းက ပြောပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူ အခု မင်းကို ကွာရှင်းချင်ပြီတဲ့၊ ဒီမှာ စာရွက်စာတမ်းတွေ သူ့လက်မှတ်ပါပြီးသား..အော် ပြီးတော့ အိမ်ကိုလည်း သူတစ် ယောက်တည်း အပိုင်လိုချင်တယ်တဲ့၊ ဒီထဲမှာ သုံးစွဲဖို့ငွေတချို့လည်း ရှိတယ်…”
အရာအားလုံး ဆုံးရှုံးလိုက်ရသည့်အခါ လူတစ်ယောက်ရဲ့ရင်ထဲ ဘယ်လောက်ဗြောင်းဆန်သွားမှာပါလိမ့်….ကျွန်မ တွေးထိတ် ကာ နစ်ခ်ရဲ့ကြေကွဲမျက်နှာကို ဘယ်လို ဆက်ကြည့်ရမယ်မှန်း မသိတတ်တော့ပါ။ မျက်စိရှေ့မှာ မြင်နေရသည့် နစ်ခ် ပုံစံကတော့ ဘာမှမရှိတော့သည့် သူ့ဘ၀အခြေအနေအပေါ် တည်ငြိမ်စွာလက်ခံယူလိုက်ပြီ ဆိုတာပါပဲ။ ပြီးတော့ သူက ပြောလိုက်သေးသည်။
“တောင်းပန်ပါတယ် လို့ ငါ့မိန်းမကို ပြောလိုက်ပါ”တဲ့။ မိမိရဲ့အားနည်းချက်ကို မိမိဘာသာ သိရှိသဘောပေါက်သွားသူအဖို့ တောင်းပန်စကားကလွဲပြီး တခြားစကား ဆိုဖွယ်မရှိတော့ပြီပဲ။
ဘီယာဝယ်နေကျ စတိုးဆိုင်လေးရှေ့ နစ်ခ် ရောက်သွားချိန်မှာ ကျွန်မ ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားသည်။ ဘာမှမရှိတော့သည့်ဘ၀ကို စိတ်နာနာနှင့် ဘီယာရည်တွေထဲ ထပ်ကာထပ်ကာ ရေစုန်မျော နစ်မြှုပ်ပစ်လိုက်တော့မလား။
ခြေလှမ်းတွေ တစ်ချက်တုံ့ခနဲဖြစ်သွားပေမဲ့ နစ်ခ်က စတိုးဆိုင်ကို လျစ်လျူရှုကျောခိုင်းကာ ဆက်လျှောက်သွားခဲ့သည်။ နစ်ခ်ရဲ့ အနာဂတ်အတွက် ကျွန်မ စိတ်မပူတော့ပါ။ လောလောဆယ် သူ့မှာ ဘာမှ မရှိတော့ပေမဲ့ တစ်နေ့ အရာရာသူ့ဆီ ပြန်ရောက်လာအောင် နစ်ခ် စွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မည်လို့ ကျွန်မ ယုံကြည်လိုက်ပါသည်။ အခု သူ့ဆီက ထွက်သွားကြသည့်အရာတွေထက် ပိုပြီး သစ်လွင် တောက်ပမည့် အရာရာတွေပေါ့။
Film – Everything Must Go
Cast – Will Ferrell ( Nick Halsey )
Rebecca Hall( Samantha )
Michael Pena ( Frank)
(Family မဂ္ဂဇင်း၊ ဒီဇင်ဘာ)
1:59 AM ဖြိုးဖြိုးဖတ်ဖို့ No comments
8:30 AM ဖြိုးဖြိုးဖတ်ဖို့ 1 comment
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က မေမေပြောခဲ့သလိုပါဘဲ အာတသတ်ဟာ လူပေါင်းမှားပြီး တန်ဆောင်မုန်းညရဲ့အလှအေးရိပ်မှာ ကြည်နူးချွေးသိပ်ဖို့ နေနေသာသာ စားလို့ မ၀င်အိပ်လို့မပျော် နေမထိ ထိုင်မသာ နောင်တတွေရ ဗြုံးကနဲ သူ့ဆရာ ဒေ၀ဒတ် မြေမျိုခံရတယ်လို့ ကြားရော ဒါးသွားလှံသွားပေါ် တည်ရှိနေတဲ့လူလို ဒုက္ခဆင်းရဲတွေ ဖြာဖြာဝေနေသတဲ့။
ဒီနေရာမှာ ဒေ၀ဒတ်မြေမျို ခံရပုံကလေး နည်းနည်းမြင်သာ ထင်သာ ပြောပြချင်သေးတယ်။ ဒေ၀ဒတ်ဟာ ယသော်ဓရာဒေ၀ီရဲ့ မောင်တော်အရင်း ဖြစ်တာမို့ ဘုရားရှင်နဲ့ ဆွေမျိုးစပ်ရင် လူ့ဘ၀က ယောက်ဖတော် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားကို အမြဲ ကန့်လန့်တိုက်ခဲ့တဲ့ ဒေ၀ဒတ်ဟာ နောက်ဆုံးသူ့အမှားကိုမြင်လာတဲ့ တနေ့ ဘုရားရှင်ကို ကြေရာကြေကြောင်းဝန်ချတောင်းပန်ဖို့ အသွား ဘုရားရှင့် ဇေတ၀န်ကျောင်းတော် အနီး ရေကန်ကြီးအရောက် ကိုယ်လက်သန့်စင်မယ်လို့ ညောင်စောင်းကုတင်က အဆင်းခြေနင်းရာ အရပ်မှာဘဲ မဟာပထ၀ီမြေကြီးက ဟက်တက်ခွဲ စုပ်ယူ မျိုချလိုက်တာ တချီတည်း မဟာအ၀ီဇိငရဲကို တန်းရောက်သွားပါသတဲ့။
(ဒေ၀ဒတ်က သွေးအံထားတော့ အားပျော့ပြီး မလှုပ်နိုင်ဘူး။ညောင်စောင်းကုတင်ကို ထမ်းစင်လုပ် ခေါ်လာကြတာ)
ဒီအကြောင်းကို လဲ ကြားရော အဇာတသတ်ဟာ ဘယ်လိုမှ ဆောက်တည်လို့ မရဘဲ ပူဆွေးသောကရောက်နေရာက ဆရာဇီဝကလမ်းညွှန်ချက်အရ ဘုရားရှင့်အထံတော်ဝင် သူ့အမှားကို ပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား။ ဘခင်ကိုပြစ်မှားမိခဲ့တဲ့ကံကြောင့် မဂ်ဖိုလ်ရဖို့ အခွင့်မရှိတော့ဘူး။ သာမန် သောတာပန် အဆင့်မျှလောက်နဲ့ဘဲ ကျေနပ်ရတော့တာပေါ့။
အဲဒီနော က် မြတ်ဘုရားရှင်ဟာ မာန်နတ်ရဲ့ တောင်းဆိုမှုကို လိုက်လျောပြီး အာယုသင်္ခါရ လွှတ်တော် မူတယ်။နောက်သုံးလအကြာမှာ ပရိနိဗ္ဗာန်စံပါတယ်။ အဲဒီနောက် ရှင်မဟာ ကဿပ ရဟန္တာကြီးမှူးပြီး ပထမသင်္ဂါယနာတင်ပါတယ်။ သင်္ဂါယနာ တင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ ဗုဒ္ဓစာစဉ်တွေမှာ ရေးခဲ့ဖူးပါပြီ။ ရဟန်းတော်များ သင်္ဂါယနာ တင်ရာမှာ မင်းရဲ့ အထောက်အပံ့ဟာ အလွန်အရေးပါပါတယ်။ အဇာတသတ်မင်းဟာ စရည်းပင်ပေါက်ရာ လှိုဏ်ဂူဝတွင် ရဟန်း၅၀၀ စုဝေးနိုင်တဲ့ ဗိမာန်တခုကို နတ်တို့ ဖန်ဆင်းသည့်အလား အဆန်းတကျယ် တည်ဆောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ရဟန်းတော်များလိုအပ်သမျှ ဆွမ်းကွမ်းကအစ ဘာမှ မချို့ တဲ့စေရဘူးတဲ့။
(ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင်စဉ်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနုဟာလည်း အဲဒီလိုဘဲ ဆွမ်းကွမ်းကအစ ပံ့ပိုးပြီး ရဟန်းတော်များစုဝေးဖို့ကမ္ဘာအေး လှိုဏ်ဂူတော်ကြီး ကို ခန်းခန်းနားနား ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။)
အဇာတသတ်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ မိမိဆန္ဒအလျောက် သက်ဝင် ယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပြန့်ပွားထွန်းကားအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံကလေးကို မေမေက ပြောချင်တာပါ။ မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံအပြီးမှာ အလောင်းတော်ကို စန္ဒကူးနံ့သာထင်းပုံထက်မှာ ထားပြီး ပူဇော် ကံတော့ကြစဉ် အလိုအလျောက်ရဲရဲတောက်လောင်ခါ မီးသဂြိုလ်ပြီးဖြစ်ရာမှ ကြွင်းသော ဓါတ်တော်တို့ကို အဇာတသတ်မင်းဟာ အာဏာစက်နဲ့ စုစည်းခဲ့ရပါတယ်။ဓါတ်တော်များဟာ ဒေါနပုဏ္ဏား အဝေမတဲ့ရာက နေရာအနှံ့ ပျံ့ နှံ့ ကုန်လို့ပါ။ ရဟန်းတော်များနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးဘုရားသာသနာနဲ့ ကောဇာတညီတည်းဖြစ်ရန် ၁၄၈ ကိုဖြိုပြီး ကိန်းအသစ်ထားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ခု သာသနာ ၂၅၀၀ ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ အတိအကျကိုတော့ အမေက မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။
အဇာတသတ်ဟာ ဘုရားဓါတ်တော်တို့ကို ဌာပနာဖို့ ရာဇဂြိုလ်ပြည်ရဲ့ အရှေ့တောင်ဘက် ကုန်းခေါင်မြင့်မောက်ရာအရပ်မှာ မတ်မတ်ရပ်ပြီး “တူး၍နက်သော်လည်း ရေမထွက်စေသော။မညီမလှသော ကျောက်တို့သည် ကွယ်ပျောက်၍မြေအတိပြီးစေသော" လို့ ဒိဋ္ဌာန်ပြိး မြေတူးပါတယ်။ မြေကျစ်စာတွေကိုအုတ်ဖုတ်ပါတယ်။ တွင်းရဲ့ အပေါ်က ရဟန္တာ ၂ကျိပ် တို့ရဲ့ စေတီများဝန်းရံ တည်ထားပါတယ်။တွင်းရဲ့ အနက်ကိုတော့ အတောင်၆၀ ရောက်အောင်တူးသတဲ့။ပြီးမှ အောက်ခြေကြေးနီပြားခံ ကျောင်းဆောက်တယ်။ ဓါတ်တော်မွေတော်တို့ကို စန္ဒကူးကြုပ်ရှစ်လုံးမှာ ထည့်သွင်းပါတယ်။ရတနာကိုးပါးတို့နဲ့ စီချယ်တဲ့ ရွှေကြုပ် ငွေကြုပ် တို့ဖြင့် အပေါ်က ထပ်ခါထပ်ခါ အဆင့်ဆင့် မွန်းမံ ထားရှိတယ်။ အပေါ်ကမှ တခါ ပတ္တမြားပြောက် ကျောက်ကို စေတီပြု ပြန်တယ်။ပြီးရင် ရွှေကျောင်း ငွေကျောင်း ပတ္တမြားကျောင်းစသည် အထပ်ပေါင်း ၁၆၀ရှိတယ်လို့ ဗုဒ္ဓ၀င်မှာ (ဇိနတ္ထပကာသနီကျမ်း)ပြဆိုထားတယ်။
တခါ အဲဒီ ဓါတ်တော် ဋ္ဌာပနာတိုက်ကိုမှ ရတနာ ၇ပါးအတိပြီးတဲ့ သဲတို့နဲ့ ကြဲပက် ဖြန့်ချပြီးရေပန်း တွေလြဲပုလုပ်ထားတယ်တဲ့။ ပြီးတော့ ၅၅၀ ဇတ်တော်လာ ဘုရားသခင်ရဲ့ မိခင်ဘခင် ဆွေမျိုးစသည် ဖွားဖက်တော်များပါမကျန် ရွှေအတိ အရုပ် သွန်းလုပ်ထားရှီပြန်တယ်။ ရွှေတံခွန် ငွေတံခွန် ၅၀၀စီ ရွှေမြူတာ ငွေမြူတာ ၅၀၀စီ နဲ့ ရွှေဆီမီးတိုင် ငွေဆီမီးတိုင် နံ့သာ ဆီမီးတိုင် ၅၀၀စီကိုလဲ ထားရှိတယ်။။ပြီးရင် မွှေးကြူလှတဲ့ ကြာညိုပန်းတခိုင်ကိုလဲ စိုက်ထူထားတယ်တဲ့။ ဒါတွေဟာ အဇာတသတ်မင်းက ရှင်မဟာ ကဿပရဲ့ အစီအမံနဲ့ ပြုလုပ်ထားရှိတာပါ။ ရှင်မဟာကဿပက နောင် အာသောကမင်းကြီး ဖွင့်လှစ်ယူဆောင် သာသနာပြုတဲ့နေ့အထိ ဆီမီးမငြိမ်းစေရန် ပန်းမညှိုးစေရန် ဓိဋ္ဌာန်ခဲ့တယ်ကွဲ့။ ရွှေပေမှာလည်းအက္ခရာရေးထိုးခဲ့သေးတာ။ အစီအမံတွေက အဆန်းတကျယ်တွေချည်းဘဲ။ ဒါတွင်ဘယ်ကမလဲ။ အထူးပြောချင်တာက ယန္တရားစက်တွေဘဲကွဲ့။
ရန်သူတွေ ဖျက်ဆီးနိုင်ခြင်းမရှိအောင် လက်နက်စွဲကိုင်ထားပြီး လေအဟုန်လို လျင်မြန်လည်ပတ်နေတဲ့ သက်ရှိလူသားလို အရုပ်တွေ ဆင်ရုပ် မြင်းရုပ်တွေ ကိုလဲ ယန္တရားအတတ်နဲ့ ဆန်းဆန်းပြားပြားဆင်ထားခဲ့သေးတာပါ။ အဲဒီအရုပ်တွေဟာ အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ် သတ်မယ် ဖြတ်မယ်နဲ့ လည်ပတ်နေလိုက်တာ မြင်တာနဲ့ အသက်တောင် ထွက်လောက်သတဲ့။ အဲဒီအပေါ်ကမှကျောက်ဖျာကြီးတွေနဲ့ ဖုံးအုပ်ပြန်တယ်။ ကျောက်ဖျာပေါ်ကမှ မြေမှုံတွေ ခင်းပြီး ကျောက်စေတီ တည်ထားကိုးကွယ်ပြန်တယ် ကွဲ့။ ဘလောက်များ အစီအမံ ကောင်းလိုက်သလဲနော်။ ဒီလိုနဲ့
အဇာတသတ်မင်းဟာ အစဉ်အတိုင်းမင်းပြုပြီး နန်းသက် ၃၂နှစ်မှာ ဘုရင်လုပ်ချင်လှပြီဖြစ်တဲ့ သားတော် ဥဒယဘဒ္ဒ မင်းသား လုပ်ကြံလို့ ကံကုန်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ပဋိသန္ဓေ ကောင်းပါလျက် လူပေါင်းမှားခဲ့ပါတယ်။ မှားမှန်းသိတာနဲ့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့တာရယ် ဘုရားသာသနာ အဓွန့်ရှည်အောင် ပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေရယ်ကြောင့် သူဟာ မဟာအ၀ီဇိငရဲမှာ အနှစ် ၆သောင်းသာ ခံရမှာဖြစ်ပြီး အရိမေတ္တေယျ ဘုရားမပွင့်မီ အချိန်မှာပင် ပစ္စေကာဗုဒ္ဓါ အဖြစ် ကျွတ်တမ်းဝင်ပါလိမ့်မယ်။
ပါဋလိပုတ်ပြည် အာသောကမင်းကြီး လက်ထက်ရောက်တော့ အဇာတသတ်မင်းထားရစ်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်တော်တိုက်ကို ဖေါက်ပြီး ဓမ္မက္ခန္ဓာပေါင်းရှစ်သောင်းလေးထောင်ကို ရည်စူးပြီး စေတီပေါင်းရှစ်သောင်းလေးထောင် ၊ ရေတွင်းပေါင်းရှစ်သောင်းလေးထောင် တည်ထားပါတယ်။ ဓါတ်တော်များကိုလည်း ဌာပနာပြီး စေတီတည် ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ကွဲ့။ ပထမတော့ သူကလျို့ဝှက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဓါတ်တော်တိုက် ကို သေချာမသိဘူး။ ရဟန်းတွေ တဆင့်စကားပြောကြားချက်အရ ရဇဂြိုလ်ပြည်မှာ အဇာတသတ်မင်းက အစီအမံထားခဲ့ကြောင်း သိတာပဲရှိတယ်။ အဲဒါ ယန္တရားအတတ်ကို နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာကို အသပြာ ထောင်ထုပ်ကို ဆင်ကျောက်ကုန်းမှာတင်ပြီး စည်လည် ရှာရတယ်။
ရှာတော့ ယခင် ယန္တရားအတတ်ကျွမ်းသူ အဆက်အနွယ်ထဲက ခေါမတိုင်း ယောမသားတွေက ငွေတထောင်ထုပ်ကို လာသိမ်းကြတယ်လေ။ အဲဒီ ယန္တရားအတတ် ကျွမ်းသူများဟာ ယောမ သား ခေါမသားလို့ ဆိုတယ်။ သူတို့ ကိုယ်မှာ မိမိအမည်နဲ့တကွ အတတ်ပညာကို ရေးထိုးထားကြတယ်။ တခြားတနိုင်ငံကိုသွားရင် သူတို့က လိုက်လံသတ်ဖြတ်ပြစ်ကြသတဲ့။ မိမိတို့ အတတ်ပညာကို ပြန့်ပွားမှာ စိုးလို့ တဲ့။အကြောင်းက ဒီလိုကွဲ့။ တခါတော့ ပါဋလိပုတ်သားတယောက်ဟာ ယောမခေါမတိုင်းကို သွားပြီး ယန္တရားအတတ်သင်ဖို့ ယန္တရားဆရာရဲ့သမီးနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အောင်လုပ် သမက်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ယောက္ခမ က မနေသာ ယန္တရားအတတ်ကို သင်ပေးရတော့တာပေါ့။ သားသမီးထွန်းကားတဲ့အခါ အတတ်ပညာကလဲ စုံပီိဆိုတော့ ပါဋလိပုတ်ပြည်ကို ပြန်ချင်တာပေါ့ကွယ်။ဒါနဲ့ သားကိုမှာတယ်။ အဖေတော့ မွေးရာဇာတိကို ပြေးတော့မယ်။ ပြေးမှန်းသိရင် ဒီက လူတွေက ကောင်းကင်ခရီးကနေ သူတို့ ယန္တရားအတတ်နဲ့ အဖေ့ကို လိုက်သတ်လိမ့်မယ်။ အဖေ လွတ်အောင်ပြေးရလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ အဖေအသတ်ခံရရင် အဖေ့ကိုယ်ကအတတ်ပညာကိုယူပြီးအသက်မွေးပါလို့ မှာသတဲ့။ အဖေဖြစ်သူဟာ ပါဋလိပုတ်ပြည်ကို ပြန်မရောက်မီ အသတ်ခံသွားရပါတယ်။
အဖေမှာခဲ့တဲ့အတိုင်း အလောင်းကို သင်္ဂြိုလ်ပြီး သူ့ပေါင်မှာရှိတဲ့ အတတ်ပညာကိုယူကာ သားက အသက်မွေးနေတာကိုး။ ဘုရင် စည်လည်တော့ သူကငွေထုပ်ထွက်သိမ်းတာလေ။ ဒါနဲ့ ယန္တရား ဆရာက မြေကိုတူး တံတိုင်ခုနှစ်ထပ်ကို အစဉ်အတိုင် တဆင့်ချင်း ဖယ်ရှားတော့တယ်။ဓါတ်တော်ပြသာဒ်ပေါ်လာတဲ့အခါ မင်းကြီးနဲ့တကွ ပြည်သူပြည်သားများ လင်္ကျာရစ် ၃ကြိမ်လှည့်လို့ စုပေါင်း ဖူးမျှော့်ကြတယ်။ ဆီမီးတိုင်တွေလဲ မငြိမ်းပါဘူး။ ကြာညိုပန်းဟာလဲမနွမ်းပါဘူး တဲ့။ နှစ်ပေါင်းအများကြိးနော် တွက်ရမှာပျင်းလို့ တွက်တော့ မကြည့်မိဘူး။ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ လက်နက်စွဲကိုင်ထားပြီး အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာ လည်ပတ်ပြေးလွှားနေသူ စက်ယန္တရား ရုပ်တွေကို လုံးဝငြိမ်သက်စေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။့ သီရိဓမ္မာ အသောကမင်းကြီးဟာ လည်း အဇာတသတ်မင်း ခက်ခက်ခဲခဲ ထားရှိခဲ့တဲ့ ဓါတ်တော်တိုက်ကို ယန္တရားစက်ဖျက်ဆီးရယူနိုင်ပြီး အမြို့မြို့ အနယ်နယ်မှာ စေတီပေါင်းရှစ်သောင်း လေးထောင် ရေတွင်းပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင် တည်စေပါတယ်။
မိမိရင်မှဖြစ်သော သား မဟိန္ဒနဲ့ သမီး သင်္ဂမိတ္တာတို့ကို သာသနာ့ဘောင်အတွင်းသွတ်သွင်း ချီးမြှင့်ပြီး လင်္ကာဒီပကျွန်းကို( သီဟိုရ်ကျွန်း ယခု သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ) သာသနာပြု စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ယောမတိုင်းသားတို့ ကြားသိတဲ့အခါ ယောမဘုရင်ကို လျှောက်ထားပါတယ်။ ယောမဘုရင်က သိပ်စိတ်ဆိုးပြီး ဘယ်သူဖျက်သနည်း မေးတော့ ရှေးယခင်က အတတ်သင်လာဖူးသူ၏ သား ဖျက်ဆီးကြောင်း လျှောက်တင်တဲ့အခါ သံအတိပြီးသောတံတင်းတခု တည်ဆောက်စေပြီး အတွင်းမှာ သံလျက်ပုန်းစွဲကိုင်သူ သူသတ်သမားကိုစီရင်ကာ အသောကမင်းကြီးထံ လက်ဆောင်ပဏ္ဏာအဖြစ် ဆက်သစေတယ်။ အသောကမင်းကြီးနိုင်ငံမှာ ဒီလိုပညာရပ်မျိုး တတ်ကျွမ်းသူ မရှိပါဘူး။ ယခင် ယန္တရားဆရာကလေးကို ခေါ်ယူ ဖွင့်စေတဲ့အခါ ဆရာလေးက မဖွင့်ပါရစေနှင့် လို့ အကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆိုပါတယ်။ သံတံတင်း(သေတ္တာ) အတွင်းမှာ ပါရှိတဲ့ စက်ရုပ်ဟာ သူ့လည်ကိုဖြတ်ယူပြီး ယောမသို့ ကောင်းကင်ခရီးဖြင့် လျင်မြန်စွာ ပြေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပေမဲ့ ဘုရင်က နားမ၀င်ပါဘူး။ ရတနာ သေတ္တာသာဖြစ်တယ်လို့ ယူဆပြီး မင်းမိန့် မင်းအာဏာနဲ့ဖွင့်ခိုင်းတော့တယ်။
ဖွင့်မိရင် ဖုတ်သွင်းအပ်သော လူရုပ်ဟာ သူ့လည်ကို ထိုးခုတ်ဖြတ်ယူလိမ့်မယ် အသက်ကို ချမ်းသာပေးပါလို့ သနားစဖွယ်ပြောသော်လဲ ဘုရင်က မယုံပါဘူး။ အမတ်တွေ စကားကိုသာ အကောင်းထင်ပြီး အဓ္မ္မဖွင့်စေပါတယ်။ မဖွင့်ရင်လဲ ဘုရင်က သတ်မယ်။ ဖွင့်ရင်လဲ လူရုပ်က သတ်ဖြတ်မယ်။ တကယ့် အကျဉ်းအကြပ်ထဲပါဘဲ။ယန္တရားဆရာလေးဟာ အိမ်သူဇနီးနဲ့ သားသမီးထံပြန်လို့ မှာစရာရှိတာ မှာကြားပြီး ဘုရားကို အာရုံပြု လို့ မင်းမိန့်အတိုင်း ဖွင့်ပါတယ်။ လျှို့ဝှက်တဲ့သော့ခလုပ်လဲပွင့်ရော သေတ္တာထဲက သံလျက်နှင့်လူ ဟာ ခုန်ထွက်လာပြီး တချက်တည်း ၀ါးညွှန့်ကို ဖြတ်သလို ဦးခေါင်းကိုဖြတ်ယူခါ ကောင်းကင်ခရီးကနေ ယောမတိုင်းကို လေအလျင်ကဲ့သို့ ပြေးပါလေရော တဲ့ကွယ်။
4:39 AM ညွှန်းတဲ့ ရုပ်ရှင် 1 comment
ပြသချိန် - ၉၇ မိနစ်
ဒါရိုက်တာ - Peter Ramsey
ထုတ်လုပ်သူ - Christina Steinberg, Nancy Bernstein
ဇာတ်ညွှန်း - David Lindsay-Abaire
သရုပ်ဆောင်များ - Chris Pine ... Jack Frost (voice)
Alec Baldwin ... North (voice)
Hugh Jackman ... E. Aster Bunnymund (voice)
Isla Fisher ... Tooth (voice)
Jude Law ... Pitch (voice)
Dakota Goyo ... Jamie (voice)
ပူပင်ကြောင့်ကြမဲ့တဲ့လူငယ်လေး Jack Frost လေး။ သူက ဘာစည်းကမ်းမှမရုမစိုက်ပါဘူး။ ဘာတာဝန်ဝတ္ထရားမှလည်း ထမ်းဆောင်စရာမရှိတဲ့လူငယ်လေးပဲ။ သူသွားတဲ့နေရာဒေသတိုင်းမှာ အေးမြတဲ့ဆောင်းရာသီကိုသယ်ဆောင်သွားနိုင်သေးသတဲ့။ ဒါပေမဲ့ အရာရာတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမယ့်တစ်နေ့ရောက်လာခဲ့ပြီ။ အိပ်မက်ဆိုးတွေရဲ့ဘုရင်ကြီး Pitch က ကလေးတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကမ္ဘာကို အမှောင်ကမ္ဘာထဲသိမ်းကျုံးဆွဲနှစ်တော့မယ်။ မည်းနက်သိပ်သည်းတဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ ကလေးတွေအလဲလဲအပြိုပြို ထိခိုက်ရှနာကုန်တော့မှာပေါ့။ ကလေးတို့ရဲ့ ကမ္ဘာကို အုပ်ထိန်းကြတဲ့သူတွေ ခရစ်စမတ်ဘိုးဘိုး၊ ဒဏ္ဍာရီထဲက ကလေးတွေရဲ့ငယ်သွားနတ်သမီးလေး၊ အီစတာယုန် နဲ့ သဲလူ တို့က ဂျက်ကိုပါ တာဝန်တွေပေးအပ်တော့တယ်။ “ဂျက် ရဲ့ အကူအညီကို ငါတို့လိုအပ်နေပြီ။ မင်း မကူညီဘဲ ငါတို့ ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး” တဲ့။ ဒဏ္ဍာရီထဲက သဲလူလေးSandy ဖန်တီးပေးတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ရွှေရောင်သဲအိပ်မက်လေးတွေကို Pitch က လက်ညိုးတစ်ချက်ပဲကွေးပြီး တောက် ထုတ်လိုက်တယ်။ ရွှေရောင်အိပ်မက်တွေပြိုပျက်ကုန်ပြီ။ ညအိပ်မက်ဆိုးတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲဖန်တီးလိုက်ပြီ။ ဘူဂီးမန်း Pitch ရဲ့ မိစ္ဆာလုပ်ရပ်တွေကို ရပ်တန့်ဖို့ ဘာဝတ္ထရားမှ ဂရုမစိုက်တဲ့လူငယ်လေးဂျက်က ခေါင်းညိတ်ပါ့မလားပဲ။ အမှောင်ကမ္ဘာထဲ စုံးစုံးမြုပ်မသွားအောင် အကုန်လုံးက နိုးထရတော့မှာပေါ့။ Sandy နိုးထတော့၊ ဂျက်ရောပဲ။ အားလုံးပဲ ဒီအချိန်မှာ နိုးထ ပေါ်ထွက်ရတော့မှာပေါ့။ ဂျက်ကတော့ ပြောပါတယ်။ “ငါ မကြောက်ဘူး” တဲ့။
ပြသချိန်- ၁၃၀ မိနစ်
ဒါရိုက်တာ - Joe Wright
ထုတ်လုပ်သူ - Tim Bevan, Paul Webster
ဇာတ်ညွှန်း - Tom Stoppard
သရုပ်ဆောင်များ - Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson, Kelly Macdonald
Pride & Prejudice နဲ့ Atonement တို့မှာ ကီရာနိုက်တလေ တို့နဲ့ အတွဲညီခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဒါရိုက်တာ Joe Wright ရဲ့ ကီရာနိုက်တလေ နဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒရာမာရုပ်ရှင်နောက်ထပ်တစ်ကားပါ။ ရုရှားစာရေးဆရာကြီး လီယိုတော်စတွိုင်းရဲ့ ၁၈၇၇ ခုနှစ်က ၀တ္ထုကို နောက်ထပ်ပုံဖော်လိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ပါပဲ။ ၁၉ ရာစုနှစ်က ရုရှားအင်ပါယာရဲ့ အဆင့်မြင့် လူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းက မင်းမျိုးနွယ်ဝင် အမျိုးသမီးလေးတစ်ဦးရဲ့ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းခဲ့တဲ့အချစ်၊ မိသားစုဘ၀အကြောင်းတွေ ဇာတ်အိမ်တည်ရေးသားခဲ့တဲ့ လီယိုတော်စတွိုင်းရဲ့ Anna Karenina ကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် အများကြီးပဲ ရိုက်ကူးခဲ့ကြတယ်။ ၁၉၁၄ မှာ Anna Karenina နဲ့ပဲ ရုရှားဒါရိုက်တာ ဗလာဒီမာဂါဒင်က ရိုက်ကူးအသက်သွင်းလိုက်တယ်။ ၁၉၁၅ မှာ အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ပါ။ ၁၉၂၇ မှာ ရုပ်ရှင်ကားနာမည်ကို Love လို့ပေးခဲ့တယ်။ အမေရိကန်ပရိတ်သတ်အကြိုက် ပျော်စရာဇာတ်သိမ်းနဲ့ အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁၉၃၅ က Anna Karenina နာမည်နဲ့ပဲ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်က နာမည်အကြီးဆုံးလူပြောအများဆုံးပဲလို့ဆိုတယ်။ ၁၉၄၈ မှာ ဗီဗီယန်လေးနဲ့၊ ၁၉၅၃ မှာ ရုရှားရုပ်ရှင်၊ ၁၉၆၀ မှာ River of Love လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ အီဂျစ်ရုပ်ရှင်၊ ၁၉၆၇ မှာ ဒါရိုက်တာ အလက်ဇန်းဒါးဇာခီရဲ့ ရုရှားရုပ်ရှင်၊ ၁၉၇၄ မှာ လည်း ရုရှားရုပ်ရှင်နောက်ထပ်တစ်ကား၊ ၁၉၈၅ မှာ မင်းသားခရစ်စတိုဖာရိဖ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ တီဗီဇာတ်လမ်း၊ ၁၉၉၇ မှာ မင်းသမီး ဆိုဖီမာဆဲ နဲ့ အကြိမ်ကြိမ်ရိုက်ကူးခဲ့ကြတာပါ။ ကီရာနိုက်တလေ ရဲ့ Anna Karenina ကားမှာလည်း တောက်ပခမ်းနားလွန်းလှတဲ့ ကပွဲခမ်းမကြီးတစ်ခုအတွင်း မိန်းမပျိုလေးတွေပျော့ပြောင်းနူးညံ့စွာ ကခုန်နေကြတာများ တိမ်းညွတ်ယစ်မူးစရာရယ်။ များပြားလှတဲ့အသည်းနှလုံးတွေကြားမှာ အချစ်တွေကလည်းများမှာပဲပေါ့။ အင်ပါယာတစ်ခုရဲ့ ဆည်းဆာအချိန်လေးမှာ အချစ်တစ်ခု တုန်ရီလှိုက်ဖိုသွားခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး တစ်စုံတစ်ခုအတွက်မဟုတ်ဘဲ၊ အားလုံးအတွက် စတေးသင့်ပါရဲ့လား။ ကျွန်မ သိတယ်။ ဒါ ရာဇ၀တ်မှုပဲ။ ရှင် စည်းကမ်းချိုးဖျက်ခဲ့ပြီ။ ကျွန်မရဲ့ ဘ၀ကို လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးပါ လို့ အော်ဟစ်လိုက်တယ်။ သူကလည်း ဂုဏ်သိက္ခာမရှိတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်လို့ စွတ်စွဲခဲ့ပြီ။ ဒါ မင်းလိုချင်တာပဲလေ။ မင်းသိလား၊ မင်းလိုချင်တာဘာလဲ တဲ့ ပြန်လှန်အော်ဟစ်တာပဲ။ ရုရှားစစ်ဗိုလ်ချုပ် ကာရဲနင် ရဲ့ ဇနီး အန်နာဟာ ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ ဗရွန်စကီးနဲ့ ချစ်ကျွမ်းဝင်သွားတယ်။ လူပျိုလူလွတ် ဗရွန်စကီးက အန်နာကို ချစ်မြတ်နိုးသွားခဲ့ပြီ။ ဗရွတ်စကီးက အန်နာကို လက်ထပ်ယူလိုပါတယ်တဲ့။ အာဏာနဲ့ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေရဲ့ တိုက်ပွဲကြားမှာ အန်နာရဲ့ အချစ်က အာဏာဆီမှာလား ငွေကြေးဆီမှာလား၊ အဲဒါတွေနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ အချစ်သပ်သပ် တစ်ခုတည်းလား။ အန်နာရဲ့ဘ၀က အေးချမ်းနိုင်ပါ့မလားပဲ။ ကီရာနိုက်တလေရဲ့ ချစ်မက်ဖွယ်ရာ၊ သနားကြင်နာစရာ အပြောင်မြောက်ဆုံး သရုပ်ဆောင်မှုတွေ ခံစားနိုင်မှာပါ။ ထူးခြားတဲ့ Anna Karenina ရုပ်ရှင်နောက်ထပ်တစ်ကားအဖြစ်လည်း ရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိတ်သတ်တွေနှစ်သက်စွာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဦးမှာပါပဲ။
ပြသချိန်- ၉၇ မိနစ်
ဒါရိုက်တာ - Andrew Dominik
ထုတ်လုပ်သူ - Brad Pitt,Dede Gardner,Steve Schwartz,Paula Mae Schwartz,Anthony Katagas
ဇာတ်ညွှန်း - Andrew Dominik
သရုပ်ဆောင်များ - Brad Pitt, Ray Liotta, Richard Jenkins, Scoot McNairy
ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုဝတ္ထုမျိုးတွေနဲ့ နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ အမေရိကန်စာရေးဆရာကြီး George V. Higgins ရဲ့ ၁၉၇၄ လောက်က ၀တ္ထု Cogan’s Trade ကို နယူးအော်လိန်းမှာ တည်ပြီးရိုက်ကူးထားပါတယ်။ ၂၀၁၂ ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲမှာ အစမ်းပြသခဲ့တော့ ဘရက်ပစ်ရဲ့ အပစ်အခတ်တွေနဲ့ ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း သရုပ်ဆောင်ပုံတွေကို ပရိတ်သတ်တွေက အားရကျေနပ်ခဲ့ကြသတဲ့။ လုံခြုံရေးအတွက် အမြင့်ဆုံးကြိုတင်ကာကွယ်ထားတဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ ပိုကာကစားပွဲတစ်ခုမှာ လုယက်တိုက်ခိုက်မှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ အဲဒီဖရိုဖရဲဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့လုယက်မှုထဲ ဘယ်သူက အဓိက တရားခံလည်းဆိုတာ သေသေကြေကြေစုံစမ်းထောက်လှမ်းမယ့် သေနတ်သမားတစ်ဦးက ဂျက်ကီကိုဂန်(Brat Pitt) ပေါ့။ လူနှစ်ယောက်ထဲနဲ့ ဒီပွဲကို ကစားသွားခဲ့တာ။ သွေးအေးသေနတ်သမား ကိုဂန်က ပြောတယ်။ စကားလုံးတွေ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးပေါ့။ “ငါ မင်းဆီက အမိန့်အာဏာကို လက်မခံနိုင်ဘူး။ အမေရိကဟာ နိုင်ငံတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပဲကွ” ။ “ငါက အမေရိကမှာ နေတာလေ၊ အမေရိကမှာ မင်းကိုယ်တိုင် မင်းအပိုင်ပဲ” လို့လည်းပြောရဲ့။ “မင်း ဘယ်သူ့ကိုမဆို အမြဲသတ်ဖြတ်နေကြပဲလား” တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သာမန်ကာလျှံကာမေးတယ်။ မေးလည်းမေးတယ်၊ ပြောလည်းပြောနေတာပဲ။ ပြီးတော့ သတ်ပစ်လိုက်တော့တယ်။ “သူတို့ ငိုယိုတယ်။ သူတို့ မိခင်တွေအတွက် အသနားခံတောင်းပန်ကြပြန်တယ်။ ငါ သူတို့ကို နူးညံ့စွာ .. အသာအယာလေးပဲ။ ပစ်သတ်လိုက်ရတာ ကြိုက်တယ်။ ခပ်ဝေးဝေးကနေပေါ့” တဲ့။
ပြသချိန်- ၉၄ မိနစ်
ဒါရိုက်တာ - Steven C. Miller
ထုတ်လုပ်သူ - Shara Kay, Phyllis Laing, Richard Saperstein, Brian Witten
ဇာတ်ညွှန်း - Jayson Rothwell
သရုပ်ဆောင်များ - Denzel Malcolm McDowell, Jaime King, Donal Logue, Ellen Wong
မြို့လေးတစ်မြို့က လုံခြုံရေးလက်ထောက်အရာရှိတစ်ဦးဟာ စန်တာကလော့စ်အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ လူသတ်ချင်နေတဲ့အန္တရယ်ကောင်ကို အမဲလိုက်သလို သတိကြီးကြီးထားပြီး ရှာဖွေနေတယ်။ အဲဒီစန်တာကလောစ့်က ခရစ်စမတ်ညနေခင်းမှာပေါ့။ မြို့ငယ်လေးက လူတွေကို အကြောက်ကြီးကြောက်၊ အလန့်ကြီးလန့်နေရအောင် ကြမ်းရမ်းနေခဲ့တာကိုး။ ခရစ်စမတ်စန်တာတွေက ပွဲတော်ညနေခင်းမှာ လမ်းပေါ်မှာပြည့်နှက်နေတယ်။ လူသတ်သမားဟာ စန်တာကလောစ့်တွေထဲ ရောနှောနေလိုက်တယ်။ သူ သတ်ဖြတ်ရမယ့်လူတွေရဲ့ စာရင်းကို ချရေးနေတယ်။ နှစ်ကြိမ်ပြန်ပြီး စစ်တယ်။ ဘုရားကျောင်းမှာ Slilent Night သီချင်းကို သီကြွေးနေကြပြီ။ “Silent Night .. Holy Night … တိတ်ဆိတ်တဲ့ည၊ သန့်စင်မွန်မြတ်လှတဲ့ ညပါ။ အားလုံးဟာ ငြိမ်းအေးလို့၊ အားလုံးဟာ တောက်ပလို့ …” ။ ဒေါက် … ဒေါက် … ဒေါက် … တံခါးခေါက်သံနဲ့ အတူ ခေါင်းလောင်းလေးတွေလှုပ်ခါသံ ချိုလွင်စွာကြားလိုက်ရတယ်။ တံခါးဖွင့်ပေးတဲ့မိန်းမငယ်လေးရဲ့ ပထမမျက်နှာအမူအရာက ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ ပီဘိကလေးငယ်လိုပဲ။ မိန်းကလေးရဲ့ ဒုတိယမျက်နှာမှာတော့ မယုံနိုင်ခြင်းများစွာနဲ့ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လို့သွားတယ်။ အားကုန် အော်ဟစ်လိုက်ပေမယ့် မိန်းကလေးနောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။ စန်တာကလောစ့်လာခဲ့ပြီ။ မြို့ငယ်လေးက လူတွေအတွက် အဲဒီစန်တာကလောစ့်က ဘာတွေများ ယူဆောင်လာခဲ့ပါသလဲ။ တိတ်ဆိတ် အေးချမ်းတဲ့ ခရစ်စမတ်တစ်ညနေခင်းမှာပေါ့။ ။